လာမည့်ငါးမဖမ်းရရာသီအတွင်း ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလှေများအပြင် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များခွင့်ပြုထာ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈- လာမည့်ငါးမဖမ်းရရာသီအတွင်း ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းလှေများအပြင် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များခွင့်ပြုထားသည့် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလှေများကိုပါ တစ်ပါတည်းငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပိတ်ပင်ရန် တောင်းဆို သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ သိရသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနသည် ငါးသယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်အတွက် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်စဉ်ငါးမဖမ်းရရာသီအဖြစ် သုံးလသတ်မှတ် ၍ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းသင်္ဘောများကို ရာခိုင်နှုန်းအလိုက်သာ ငါးဖမ်းဆီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်စိုးက Close Season, Close Area နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစည်းအဝေးက မခေါ်ရသေးဘူး။ ဒီလအကုန်မှခေါ်မှာ။ Close Season, Close Area နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင် ပြန်ဖမ်းချိန်မှာ ငါးတွေပေါလာမယ်ဆိုပေမယ့် မပေါလာဘူး။ ပုံမှန်အနေအထား လောက်ပဲ သွားနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ ဘာမှတိုးတက်မှုသိပ်မရှိဘူး။ ဒါကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ ကမ်းနီးလှေတွေကသွားဖမ်းနေတယ်။ ကမ်းနီးဆိုတာမှာ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလှေငယ်စစ်စစ်တွေကို မပြောလိုပါ ဘူး။ ဒေသခံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ကအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ဖမ်းဆီးခွင့်ပြုထားတဲ့ လှေတွေကိုပြောတာ။ အဲဒီလို လှေတွေကအများကြီးရှိတယ်။ ဒီလှေတွေက ဖမ်းဆီးနေတော့ ပိတ်ထား တာက သိပ်မထူးခြားဘူး။ အဲဒါတွေကိုတင်ပြသွားမယ်။ ကမ်းနီးစစ်စစ် လေးတွေ ပေးဖမ်းထားတာလက်ခံပေမယ့် ကမ်းနီးမဟုတ်ဘဲ ဖမ်းနေတဲ့ လှေတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက် ပေးဖို့ ဒါတွေပိတ်လိုက်မှအားလုံးကအကျိုးရှိမယ်”ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ယင်းအပြင်ငါးမဖမ်းရရာသီကို သုံးလသတ်မှတ်ခြင်း၊ ငါးဖမ်း ဆီးခွင့် လုံးဝပိတ်ပင်ခြင်းအပေါ် ဖြေလျှော့ပေးရန်အတွက်လည်း တင်ပြတောင်းဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဦးမောင်မောင်စိုးက ”ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ငါးမဖမ်းရရာသီ သုံးလပိတ် ပြီး ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ကို ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာ သူတို့သဘောထားက လုံးဝပေးမထွက်စေချင်ဘူး။ လုံးဝပိတ်ထား ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ ဦးတို့ကတော့ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုနဲ့ ငါးဖမ်းဆီး ခွင့်တောင်းမယ်။ မဖြစ်မနေ ပိတ်မယ်ဆိုရင်လည်း သုံးလလုံးမဟုတ်ဘဲ ၄၅ ရက် ဒါမှမဟုတ် ရက် ၅ဝ လောက်သာပိတ်ဖို့တောင်းဆိုသွားမယ်။ အလွန်ဆုံးပိတ်ရင် နှစ်လပေါ့။ သုံးလပိတ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သုံးလလုံးပေးမဖမ်းဘူးဆိုရင် လုပ်ငန်းကရပ်သွားနိုင်တယ်”ဟု ပြော သည်။
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် ပြီးခဲ့သည့်ငါးမဖမ်းရကာလ (Close Season)ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မေ ၁၆ ရက်မှ သြဂုတ် ၁၅ ရက်အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး ယင်းကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည် တွင်း၊ ပြည်ပကမ်းဝေး ငါးဖမ်းသင်္ဘောများအားလုံး ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာ ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပိတ်ထားရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်းပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်သားများနှင့် ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအများစု လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်း သားငါးရှားပါးမှုများပါ ကြုံတွေ့လာနိုင်ခြင်းကြောင့် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းသင်္ဘောများ ၏၂ဝရာခိုင်နှုန်းကို ဖြေလျှော့ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်ဦးမြင့်လွင်က ”လုပ်ငန်းတွေမှာ လူပမာဏအများ ကြီးနဲ့လုပ်ကြရတယ်။ ငါးမဖမ်းရဘဲ သုံးလနားထားရတဲ့အခါ ပြန်ထွက် တဲ့အချိန်မှာ ရေလုပ်သားတွေ ပြန်ခေါ်ရတာအရမ်းခက်တယ်။ ဒါတွေ ခံစားရတယ်။ နောက်ပြီး လှေတွေထားရမယ့်နေရာတွေ ရှားပါးတယ်။ တချို့နေရာ တွေကအန္တရာယ်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ ငါးဖမ်းကိရိယာတွေ ဆိုရင် သုံးလို့မရဘူး။ ပျက်စီးကုန်တယ်။ ဖြစ်စေချင်တာက ပိတ်တော့ ပိတ်ပါ။ တစ်လဖြစ်ဖြစ် လုံးဝပိတ်ပြီး ကျန်တဲ့အချိန်အပြည့်အဝပေး ဖမ်းစေချင်တာပေါ့။ တစ်လမဟုတ်ရင်တောင် နောက်ဆုံးလေးဆယ့် ငါးရက်ဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ပါ”ဟု ပြောသည်။
ပြည်တွင်းပဲဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့် တောင်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရေး မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစံ?
မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး ကိန်းဝပ်စံပယ်ရာ ကျောင်းတော်ကြီးကို ရွှေချိန်လေးပိဿာနှင့် ကျပ?
၂၀ဝ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအား ထောက်ခံပွဲ လပွတ္တာမြို့၌ကျင်းပ